New Redmi Rịba ama 10 Pro Max: atụmatụ, ọnụahịa na nnweta | Gam akporosis
Anyị ka kwurịtara maka ekwentị ọhụrụ Redmi abụọ na-ekwu na ha bụ ndị eze bara uru maka ego n'afọ a. Ma ọ bụ na anyị na-ezo aka Redmi Rịba ama 10 na Rịba ama 10 Pro, ma o nwekwara otu nke na-azoputaghi na iwu a ma weputa ya na uzo mobiles a: the Redmi Rịba ama 10 Pro Max.
Ngwaọrụ a nwere ọtụtụ atụmatụ dị ka ndị ahụ dị na Redmi Rịba ama 10 Pro. Agbanyeghị, ọ pụtara n'otu akụkụ, ọ dịkwa na ese foto, ka eburu ya a isi ihe mmetụta na 108 megapixel mkpebi.
1 Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke ọhụụ Redmi Rịba ama 10 Pro Max
Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke ọhụụ Redmi Rịba ama 10 Pro Max
Ihe mbụ anyị hụrụ na Redmi Rịba ama 10 Pro Max bụ ihuenyo bụ teknụzụ AMOLED. Nke a bụ ezigbo ịwụ elu site na Redmi Rịba ama 9, nke jiri ogwe IPS LCD IPS mee ihe. Ihe ọzọ bụ na ihuenyo ihuenyo bụ 6.67 sentimita asatọ, yabụ anyị anaghị ekwu maka obere ekwentị. Agbanyeghị, anyị anaghị eche nnukwu ihu ihu, ebe ọ bụ na eriri ndị na-ejide ogwe ahụ dị oke ọkụ, na-enye mmetụta nke ihuenyo enweghị ngwụcha nwere oghere maka igwefoto selfie, nke bụ 16 MP nwere oghere f / 2.5.
A na - ejikọ foto foto nke ama a, nke nwere okpukpu anọ isi ihe mmetụta nke 108 MP mkpebi nwere oghere f / 1.79. Ihe mmetụta atọ ndị ọzọ na-eso ya bụ oghere elekere obosara nke 8 MP na mpaghara nlele 118 Celsius, onye na-agba ụta maka 5 MP maka ịbịaru foto dị nso na ihe mmetụta MPN ikpeazụ nke MP maka ịchọta ozi maka ebumnuche ahụ. dị ka ọnọdụ bokeh. N'ezie, conglomerate a na-egosipụta ọkụ ọkụ ọkụ maka ịgbanye ọkụ ọkụ.
Banyere arụmọrụ nke Redmi Rịba ama 10 Pro Max, ọ bụ Snapdragon 732G mobile ikpo okwu rue n'usoro nke ụbọchị iji nye ike na ike na etiti ekwentị. Nke a bụ 8 nm ma nwee nhazi isi: 2x Kryo 470 na 2.3 GHz + 6x Kryo 470 na 1.8 GHz. na ebe nchekwa dị n'ime 618/6 GB, enwere ike ịgbasa site na iji kaadi microSD site na oghere dị.
Batrị nke ọdụ a nwere ikike nke 5.020 mAh Ma, dị ka ụdị ndị kachasị ewu ewu nke ezinụlọ Redmi Note 10 ọhụrụ ahụ, ọ bụ 33 W. A na-ebo ebubo a site na ọdụ USB-C na chaja nke etinyere na igbe ekwentị.
N'ikpeazụ, atụmatụ ndị ọzọ dị iche iche na nkọwapụta teknụzụ gụnyere ndị na-ekwu okwu ụda, Nkwado Hi-Res Audio, ihe mmetụta infrared, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1 dị ala dị ala, yana akara IP53. Sistemụ nrụọrụ ekwentị na-abịa bụ A gam akporo 11 n’okpuru ụdị oyi akwa MIUI 12.5.
REDMI Rịba 10 PRO MAX
IKIRU 6.67-anụ ọhịa AMOLED FullHD + 2.400 x 1.080 pikselụ / 20: 9 / Corning Gorilla Glass 5 / 1.200 nits max. / HDR10
Nhazi Ihe nhazi Snapdragon 732G
Ohere TERLỌ N'IME 64/128 GB gbasaa site na microSD
GHARA CAMERAS 108 MP Main (f / 1.79) + 8 MP 118º Wide Angle + 5 MP Macro + 2 MP Bokeh
CAMERA N'IHU 16 MP nwere oghere f / 2.45
UMUAKA 5.020 mAh na 33 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa
OS Gam akporo 11 na MIUI 12.5
Njikọ Wi-Fi 802 ac / Bluetooth 5.0 / NFC / GPS + GLONASS + Galileo / Nkwado Dual-SIM / 4G LTE
Atụmatụ ndị ọzọ Side Mount Mkpisiaka Reader / ihu Faceghọta / USB-C / stereo Okwu / Nkwado maka Hi-Res Audio / Infrared Port / IP53 Rating
Mbibi na ibu ibu 106.46 x 74.5 x 8.3 mm na 178.8 gram
Emepela Redmi Rịba ama 10 Pro Max ma gosipụta ya na India na ọnụahịa ntọala nke Rs 18.999, nke hà ihe dị ka euro 217 ịgbanwe. Ọnụahịa nke ihe nlereanya a, ma ọ bụ iche iche nchekwa ya, maka ahịa Europe amabeghị, mana a ga-ekwupụta ha n'oge na-adịghị anya. N'aka nke ya, ngwaọrụ ahụ ga-ahụ mmalite nke ụwa n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » The Redmi Rịba ama 10 Pro Max bụ ukara dị ka ndị kasị elu mobile nke usoro na unmatched uru maka ego
Ihe ngosi Redmi ohuru 10 na Nkọwa 10 Pro amalitelarị na ntanye na 120 Hz na ngwa ngwa nke 33 W